Rehefa nomena fahafahana handeha any amin'ny firenena atsinanana marevaka sy tsy mahazatra ny fanontaniana faran'izay maharary sy mahaliana dia ny hitondra ho fanomezana ho an'ireo olon-tianao sy ho anao amin'ny maha-fahatsiarovana anao. Tena sarotra ny manapa-kevitra hoe inona no azo entina avy any Japana, satria lehibe tokoa ny safidy.
Eritrereto ny lisitry ny fanomezana avy any Japana, izay azonao entina ho an'ny mpiara-miasa aminao sy ireo namana tsara.
Any amin'ny faritra rehetra any Japana dia afaka mahita maneki-neko ianao. Sarin'andriana saka miaraka amin'ny paompy malaza dia malaza be ary tandindon'ny fambolena. Izy ireo dia vita amin'ny loko samihafa - avy amin'ny sary sokitra kely mankany amin'ny sary sokitra lehibe.
Tena mpankasitraka ny fahatsiarovana avy any Japan ny mpankafy. Tena malaza be eo amin'ny vahoaka izy. Misy safidy na fisakafoana. Ary raha mandray anjara amin'ny fetibe ianao dia afaka manisa amin'ny fanomezam-pahasoavana manokana izay homena anao toy ny taratasy kely na bokikely dokam-barotra.
Ny fanomezam-pahasoavana tsara avy any Japana ho an'ny mpiara-miasa dia ho fanoratana taratasy. Matetika izy ireo no ampiasaina amin'ny zaridaina sy ny fetibe, toy ny orinasa ho an'ny trano. Ny malaza indrindra dia jiro mirehitra amin'ny endriky ny volotsangana amin'ny endrika bobongo.
Amin'ny fialamboly, mividy kilalao mahazatra kendam. Hazo matanjaka misy baoritra mifatotra amin'ny tady izany. Ao an-tanindrazany, ireo tompon'ilay lalao amin'ny kendama dia heverina ho olona mazoto sy manam-paharetana.
Inona no hitondrana an'i Japon ho an'ny fianakaviana?
Ho an'ny ankizy iray dia fanomezana maoderina ny kilalao nasionaly. Ao an-tanànanay ny analoga dia ambony. Izy io koa dia vita amin'ny hazo ary nototoina tamin'ny lamosiny mamirapiratra. Isan-taona dia manamboatra sary vaovao ny mpanao asa tanana.
Ho an'ny antsasa-manila mahafinaritra, ny fanomezana tsara indrindra dia ny lobolobo. Ny fanontaniana momba ny karazana makiaingina azo avy any Japana, tsy dia sarotra loatra. Ny hatsarany dia tsy ilaina ny misalasala, fa ny safidy dia tena lehibe ary miparitaka ny masony. Ny vokatra fototra izay tena mahafaly vehivavy iray, dia shampoos, savony ary saron-tava. Amin'ireo sarontava vita amin'ny lamba tsara tarehy Puresa sy Utena. Ny endriny ho an'ny karazana hoditra sy taonan'ny fototarazo ao anatin'ny dimy minitra dia manova tanteraka ny endriky ny hoditra. Raha ny shampoo, dia vita amin'ny vatam-boninkazo, algoma, jiro apetraka na felana serizy.
Raha tsy azonao atao ny manapa-kevitra ny hitondra any Japon ho an'ny mpivady iray, dia araho amin'ny porcelain. Misy andian-jiro 18 eo amin'ny karajia japoney - avy amin'ny nentim-paharazana ho an'ny andro maoderina. Ny fanompoana toy izany dia fanomezana mahafinaritra ho an'ny fampakaram-bady na tsingerintaona.
Toerana mahafinaritra any Yekaterinburg
Fialantsasatra amin'ny Beach amin'ny volana Oktobra
Mogilev - toetoetran'ny mpizahatany
Trano Fotsy ao Bashin
Venezoela - Nosy Margarita
Mangetaheta elatra ao anaty vilany
30 firaketana tsy mahazatra avy amin'ny fanontana vaovao an'ny boky Guinness
Fahaiza-mandanjalanja dia fitaka.
Greenhouse ho an'ny zana-ketsa
Karazana kiraro manao akanjo?
Bibikely vy - resipe
Noporofoina tamin'ny volony mainty